English Learning Archives - Wall Street English
Select category Adv English Blog Career English for Your Company English Learning Learning English Tips and Hints Parents test
၂၀၂၂ မှာ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့နည်းလမ်းများ
ဇန်နဝါရီ 6, 2022
အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
နိုဝင်ဘာ 4, 2021
အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ အင်္ဂလိပ်စာဟာ လူတိုင်းလေ့လာထားသင့်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချိန်မရွေးသင်ယူနိုင်တဲ့ Language တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ စနစ်တကျ လေ့လာဖို့လိုသလို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ လေ့ကျင့်သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကို အမြန်ဆုံးတိုးတက်လာအောင်…
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့အတွက် Wall Street English ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
အောက်တိုဘာ 7, 2021
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့အတွက် Wall Street English ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်တာလဲ? အချိန်နဲ့ ငွေကြေးကို နေရာတစ်ခုခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အခါတိုင်း မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကို လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကို…
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ?
စက်တင်ဘာ 22, 2020
အွန်လိုင်းကနေ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူတာက လွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ အွန်လိုင်းကချိတ်ဆက်ပြီး ငွေပေးချေပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း စတင်နိုင်ပါပြီ။ ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ လေ့လာနိုင်သလို တစ်နေ့တာအတွက် လုံလောက်သွားပြီလို့ ယူဆတဲ့အခါမှာလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် ရပ်နားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်…
အင်္ဂလိပ်လို အလုပ်အင်တာဗျူးတွေကို အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
စက်တင်ဘာ 10, 2020
နိုင်ငံတကာနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနေကြတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုက တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပြီး အရေးပါလာသလို အလုပ်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်း အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို အင်္ဂလိပ်လို မေးမြန်းတာမျိုးတွေ တွေ့လာရပါတယ်။ အလုပ်ခန့်မယ့်သူတွေ အဖို့တော့ အင်တာဗျူးမှာကတည်းက တစ်ခါတည်း…
အိမ်ထဲကနေပဲ ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးထွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် ခရီးတွေသွားပြီး မတူညီတဲ့ ရေမြေတောတောင်တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထိတွေ့မြည်းစမ်းရတဲ့ ခရီးသွားခြင်းရဲ့ အရသာကို လွမ်းနေရပြီလား? လူအများအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအနှံ့အပြားကို အဆင်ပြေပြေ ခရီးသွားလာနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့…
Top3ways to stay motivated when Learning English.
မေ 5, 2020
English စာလေ့လာဖို့ အတွက် စိတ်အားထက်သန်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ English စာ သင်ဖို့တော့ ကြိုးစားနေပြီ။ ဒါပေမယ့် စလုပ်ဖြစ်သွားဖို့ ခက်နေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အတန်အသင့် တတ်သွားဖို့အထိ ဆက်သင်ဖို့ စိတ်မပါတာမျိုး ဖြစ်နေပြီလား။…
ဒီဇင်ဘာ 23, 2019
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်းအကျိုး (၆) ခု အလုပ်လုပ်တဲ့အရွယ်ရောက် လာတဲ့အခါ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု သင်ကြားရပါ တယ်။ ဒါကလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖို့ လစာကောင်းဖို့ ဆက်သွယ်ပြော ဆိုမှု စွမ်းရည် ကောင်းဖို့ အစရှိတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီအထဲမှာမှ…
ဘာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်သင့်တာလဲ အင်္ဂလိပ်စာဟာ အခွင့်အလမ်းတွေပေါများတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ Communication အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဘာသာစကားကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို Official language အဖြစ်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံကူးလူးဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါမှာလည်း…
အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း (၁၀) ကိုယ်ပိုင်မိခင်ဘာသာစကားသင်ယူတတ်မြောက်ဖို့ Listening ကနေစတင်ကြပါတယ်။ အူဝဲလို့အော် ပြီးမွေးဖွားလာကတည်းက ပတ်ဝန်းကျင်အသံတွေကိုစတင်နားစွင့်ပြီးတဲ့နောက် ဖေဖေ၊ မေမေ အစရှိ သည်ဖြင့် တစ်ခွန်းစနှစ်ခွန်းစနဲ့ တီတီတာတာ စတင်ပြောဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ စာဖတ်ခြင်း…
A Global Network, Working Together
အွန်လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
အွန်လိုင်းကနေ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်မှုရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
English TV Series တွေကြည့်တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်မှုအတွက် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်လဲ?
ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်အတွက် ၂၀၂၁ မှာ ပိုပြီး အရေးပါလာမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု ﻿
အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မလဲ?